ICyprus ingenye yezindawo ezidume kakhulu ebhishi naseholidini. Isihloko sethu siwusizo kulabo abavakashi abafuna ukuphumula endaweni ethule, kodwa ngesikhathi esifanayo babe phakathi nendawo yokuphila kwe-spa. Lona idolobha elincane elisogwini lwe-Protaras.
I-Captain Pier Hotel iyinkimbinkimbi yezinkanyezi ezintathu esendaweni ethule, amakhilomitha amabili ukusuka ePrataras. Ihhotela lilula ukufinyelela, njengoba isikhumulo sezindiza emhlabeni jikelele saseLarnaca singamakhilomitha angu-68 ukusuka. Ihhotela liyisakhiwo esinezitezi eziyisikhombisa futhi lisendaweni yokuqala.
Ihotela lakhiwa ngo-1987 futhi kusukela ngaleso sikhathi yakha izivakashi ngokuphumelelayo. Ukulungiswa kokugcina kwenkimbinkimbi kwenziwa ngo-2012. Ihhotela liwumngane womndeni futhi liseduze nendawo yehhotela.
I-Captain Pier Hotel inezindawo ezingu-30 kuphela zezigaba eziningana:
Izindawo ezinhlanu ze-studio ezibheke ogwini lolwandle (indawo engaba ngamamitha angu-29 square). Amakamelo afakwe imibhede emibili engashadile, kukhona isikhala esengeziwe kulesofa. Wonke amafulethi afakwe ama-TV, umoya we-air, i-Wi-Fi, ucingo. Kukhona nekhishi lekhishi emakamelweni, ephelele ngefriji, umshini wokugcoba, isitofu kanye ne-kitchenware. Emkhatsini wokumamukela ngenkokhelo, ungakwazi ukuqasha indawo ephephile. Izindawo zihlanzwa nsuku zonke, kodwa izinguquko zelineni zenziwa ngesimiso - kabili ngesonto.
Izindinganiso ezingamatshumi amabili lanhlanu. Indawo yendawo ngayinye ingamamitha ayi-46 square. Efulethini ikamelo lokulala lihlukaniswe egumbini lokuphumula, kunemibhede emibili eyodwa kanye nombhede owengeziwe phezu kwefa. Ikamelo linemidlalo ye-TV, umoya wokushisa, izinwele, i-Wi-Fi, ucingo, ikhishi ngesitofu, inetha, izitsha kanye nefriji.
I-Captain Pier Hotel inikeza izivakashi zayo izinketho ezimbili: ibhulakufesi nebhodi lesigamu. Yikuphi okukhethwa kukho okukhethwa kuwe.
Ngokwezibuyekezo zokuvakasha, isethi ejwayelekile yaseYurophu isetshenziselwa ukudla kwasekuseni: ham, ushizi, amaqanda, utamatisi, ukhukhamba, isobho, i-yogurt. Ungathola njalo into efanelekayo.
Ukuze sidle ukudla, le ndawo yokudlela inikeza izitsha okumnandi ezenziwe ngokwenza. Ekuqaleni kwesidlo, ngezinye izikhathi imigqa yezivakashi igibela ukudla, kodwa uma ufika kancane kancane, kukhona izitsha ezanele ezithebeni, futhi azikho izixuku ezisekho. Umpheki wendawo uzama futhi uzilungiselela kahle.
I-Captain Pier Hotel inomtholampilo omuhle. Insimu yayo kunendawo yokubhukuda yangaphandle futhi indawo yokuzilibazisa, indawo yokupaka, ibha, indawo yokudlela, i-reception, ikhokhelwa ephephile ekwamukeleni, ihhovisi lokushintshanisa imali, i-Wi-Fi ekamelweni lokubambela, ukuqashisa imoto, indawo yokukhumbula, imakethe mini, iphephandaba lesikhulu kanye nephephandaba. Amamagazini.
I-Captain Pier Hotel 3 * inikeza izivakashi zayo ezincane kunazo zonke ukuvakashela echibini labantwana nebala lokudlala elikhethekile. Uma kunesidingo, ihhotela lingalungiselela izinsizakalo zokuthola izingane. Endaweni yokudlela yabantwana banikezwa izihlalo ezikhethekile zokudla.
I-Captain Pier Hotel I-3 * ayihlinzeki ngokukhetha okuningi kokuzijabulisa, kodwa zonke izivakashi ezifanayo zingaya emiseleni yokudlala, ukudlala amabhiliyade, ukuqasha amabhayisikili nokungena emidlalweni yamanzi ogwini.
I-Captain Pier Hotel (eCyprus) inendawo enhle ngokuphathelene nogu. Ihotela lingamamitha angu-50 ukusuka ogwini lomhlabathi lomhlabathi. Egwini kunezikhala zokukhokha kanye nezambulela, indlu yangasese yomphakathi. Ukushona kwelanga elwandle kunomusa futhi kukhululekile, kuhle kakhulu ukuphumula nezingane.
Njengoba sesivele sikhulume, iKaputeni Pier Hotel itholakala ku-Protaras. Idolobha lezokwelapha liyaziwa ngamabhishi alo amakhulu anesihlabathi nezindawo ezinhle kakhulu ezinamatshe amakhulu. Kukhona amafulethi amaningi namahotela azo zonke izinambitheko nezesikhwama, kepha ngokuvamile indawo yokugxila igxile emaholidini omndeni nezingane. Ngaphezu kwalokho, i-Protaras izohambelana nalabo abavakasha abakhuthele abafuna ukuhlala eduze ne-Ayia Napa ngezintandokazi eziningi, kodwa ngesikhathi esifanayo bahlale kude.
Indawo yokuvakasha iqhubekela phambili echwebeni elihle lomkhiwane eCyprus. Intuthuko ekhuthele kakhulu nokwakhiwa kwaqala ePrataras eminyakeni engamashumi amathathu edlule yekhulu lama-20. Futhi manje le ndawo yenze kancane kancane ibe yindawo yezindawo zokubhuka ezinhle kakhulu zesiqhingi.
Umkhumbi owakhulunywa ngathi unomunye wamabhishi angcono kakhulu esifundeni sonke. Abavakashi bonke usuku lonke bangageza emanzini asolwandle oluthulile bese behlala esitsheni esishisayo. E-Protaras eduze kolwandle uhambo oluhamba ngamakhilomitha angu-15 lakhiwe. Ngenye yezinhlangothi zawo kukhona izitolo, amathilomu nezitolo, kanti okwesibili kuvula umbono oqhakazile olwandle.
Isimo sezulu sehhotela
Ngenxa yokuthi i-resort lizungezwe ngamatshe aqoshiwe, amabhishi asendaweni ayinamandla. Ngisho nasebusika (ngoJanuwari), izinga lokushisa aliwi ngezansi +17 degrees, futhi ehlobo ikholomu ye-thermometer iphakama kuya kuma-27-30 degrees. Isikhathi seholide siqala ekuqaleni kuka-Ephreli futhi siqhubeka kuze kube ngu-Okthoba.
Ungafika kanjani ehhotela?
Indlela elula kakhulu yokufika ku-Protaras esuka e-Ayia Napa, amadolobha atholakala kude namakhilomitha ayishumi ukusuka komunye nomunye. Ungalayela itekisi, kuyodla imali engabizi kahle. Ngaphezu kwalokho, amabhasi ezindawo zasemadolobheni kanye nokuthutha komasipala kuhamba ngale ndlela.
Amabhishi amahle kakhulu e-resort ahlala endaweni yaseFinnow Bay, okuthiwa yi-grove yamandulo yamakhiwane, eduze kwawo. Egwini, izivakashi azikwazi nje ukubhukuda nokushisa ilanga, kodwa futhi zibandakanye emidlalweni yamanzi. Entwasahlobo, izihlahla ziqhakaza ogwini, futhi ukugqama kuyashintsha ibe yindawo enhle kakhulu.
I-Protaras yindawo ekahle yezingane nemindeni, kubantu abakhetha ukuphumula endaweni enokuthula ngokumelene nokuhlelwa kwemvelo enhle. Ekubuyiselweni kokuphila kulinganiselwa, isikhathi lapha sibonakala simisa. Futhi noma kunjalo, amakilabhu asebusuku ne-disco asebenza lapha ebusuku. Kusihlwa enkundleni yasemfuleni kukhona umthombo ohlabelayo wokucula, ojabulisa abantu abanezibonisi ezimibalabala.
Emzini kunezindawo eziningi ezithakazelisayo abavakashi abangabakashela ngesikhathi sokuphumula phakathi kokugibela ogwini. Phakathi nendawo yePrataras isebenza enye yamanzi amaningi athandwa kakhulu nakakhulu kuleli siqhingi. Le ndawo emangalisayo izokuvumela ukuba ufunde okuningi ngokuphila kolwandle futhi ngesikhathi esifanayo ube nokuphumula okukhulu futhi ujabule. E-aquarium ungabona mayelana nezakhamuzi eziyizinkulungwane ezihlukene zasolwandle.
Kwi-Historical Museum of Protars, izivakashi zalesi siqhingi zizokwazi ukujwayela umlando wasendulo we-resort kuphela, kodwa sonke isiqhingi. Akuyona into encane eyithakazelisayo umzana wokudoba eduze neProtaras obizwa nge-Liopetri. Ngesikhathi leli dolobha lalidume ngamasonto alo, lalingamatshumi ayisikhombisa ekuqaleni kwekhulu lama-20. Njengamanje, inani lamathempeli liye lahla kakhulu, kodwa isonto elidumile lika-Agios Andronikos, elakhiwe ngekhulu lesishiyagalolunye, lisinda. Isakhiwo siyaziwa ngokudweba kwodonga oluyingqayizivele.
I-Captain Pier Hotel I-3 *: ukubuyekezwa
Ekhuluma ngehhotela, ngokuqinisekile ufuna ukubhekisela kuzibuyekezo zezivakashi eziye zavakashela kakade. Lokhu kuyinkimbinkimbi kungaba yindlela enhle kakhulu yeholidi yebhajethi kulabo abavakashi abazochitha amaholide abo esiqhingini esihle kangaka njengeCyprus. I-Captain Pier Hotel Apts 3 * inhle ngaphezu kwayo yonke indawo yayo. Kusuka esikhumulweni sezindiza ukuya endaweni eyinkimbinkimbi akude. Ngaphezu kwalokho, ihhotela liseduze nolwandle lwasePannera Bay (ngamamitha angu-50 kude). Kuyinto elula kakhulu kulabo abavakashelayo abafika e-resort ngenxa ye-beach-sea resort. Indawo yedolobha ingafinyelelwa emaminithini ayishumi ngokuthutha komphakathi. Akusilo kude kakhulu, kodwa ihhotela lihlala endaweni enokuthula, lapho kungekho khona umsindo wokuphila ebusuku.
Lezi zinkimbinkimbi zinezinketho eziningana zezindlu zokuhlala, ezihlome ama-mini-ikhishi kanye nezinto zokusebenza ezidingekayo. Amakamelo amasha, kusobala ukuthi adinga ukulungiswa. Ifenisha nayo iyakhathele, kodwa ngendlela efanele yokusebenza. Ngokuvamile, amakamelo anakho konke okudingayo kwabavakashi. Ukuhlanza kwenziwa njalo. I-Linen namathawula ehhotela kukhona amasha futhi ahlanzekile, ashintshwa kaningi ngokwanele, ikakhulukazi ngokuphawula.
Ukunaka okukhethekile kubhalwa kuzibuyekezo zokudla ehhotela. Ngokusho kwezivakashi, ukudla kwasekuseni ku-restaurant kunalokho kunesidingo. Njengomthetho, imenyu yasekuseni iqukethe amaqanda, i-porridge, i-toast, i-jam, i-ham, imifino nezithelo. Izidlo zihlukene kakhulu, zinezinyama zokudla nokudla okuningi. Kodwa ngeziphuzo zakusihlwa azifakiwe emalini okudla. Ngezinye izikhathi kule ndawo yokudlela kukhona imigqa emincane, kepha ukudla kukhonzwa ngaso sonke isikhathi ngobuningi obanele. Ama-waiters asebenza ngokushesha. Ngokuvamile, ukudla ehhotela kuyamukeleka kakhulu. Eduzane nenkimbinkimbi kukhona amathilomu nezindawo zokudlela, lapho ungadla futhi. Eseduze kukhona isitolo, lapho ungathenga khona yonke imikhiqizo edingekayo. Lokhu kubalulekile, ngoba amakamelo anekhishi, ngakho-ke ungakwazi ukulungisa njalo ukudla.
Inzuzo engavumelekile yehhotela ukuthi iseduze nogu lolwandle. Abavakatjhi bahlala benelisekile khulu ngelwandle. Ibhishi linekhava elihle futhi linendlela elula emanzini. Ulwandle kule ndawo alujulile, lukhululekile kakhulu kubantwana. Emanzini angasenhla ahlala efudumele futhi ehlanzekile. Indawo engcono kakhulu yezingane ayitholakali.
Abasebenzi behhotela bayabungane, ngokushesha bafuna abavakashi. Ihotela linomhlahlandlela ohlinzeka ngezinkambo zokubuka. Kodwa-ke, okukhangayo okuseduze kungabhekwa ngokuzimela usebenzisa izithuthi zomphakathi. Ngaphezu kwalokho, ungakwazi ukuqasha imoto lapho ungayibona khona isiqhingi sonke. Othandwa kakhulu phakathi kwezokuvakasha ulwandle luhamba ngokudoba noma ukuhamba emkhunjini wepirate. Isivakashi ngasinye sehhotela singahlela ukuzithokozisa kwabo ngokuzimela, hhayi ukulindela izithombe zendawo.
Ingabe kufanelekile ukutusa izindwendwe zehhotela iKaputeni Pier Hotel? Ukubuyekezwa kwezindwendwe zenkimbinkimbi kunika ithuba lokuthola iziphetho. Ihhotela lingasetshenziswa ngokuphepha njengesikhungo sesabelomali sezakhamuzi ezingenasidingo. Kodwa ngesikhathi esifanayo, le nkimbinkimbi inezinzuzo ezimbalwa ezikuvumela ukuba uchithe iholidi elimnandi, uma ungaqapheli ama-nuances amancane. Ngempela, into ebaluleke kakhulu ukuthi ihhotela likhona ogwini lolwandle oluhle, futhi abavakashile banethuba elihle kakhulu lokuphumula elwandle. Ngakho-ke, ihhotela lingaqondiswa kuzivakashi ezingezona ezonakalisiwe ezifuna izinketho zesabelomali zeholidini.
Country Club "Lesnaya Polyana" (Berezovsky): uhlu amasevisi, isithombe, ukubuyekezwa
Ukumaketha umqondo Modern
Art Cafe "isandla": mayelana isikhungo, amamenyu, izinkomba, ukubuyekezwa
Ukuthinta yothando lokuzalwa imikhonzo umkakhe kumyeni wakhe
Ihhotela Renaissance Golden Buka Beach Resort Indawo abantu 5 *: ukubuyekezwa, izincazelo, izincazelo kanye nokubuyekezwa
Izikhangibavakashi eMoscow Kremlin. Umlando ukwakhiwa, umdwebo, incazelo